Warshadda Dhiig Bixinta Dhiigga Dhirta | Tuubbooyinka Dhiiga qaada ee Shiinaha Shiidayaasha, Bixiyaasha
Tuubada Tijaabada Sunta Nucleic Acid
Koofiyada badbaadada cad waxay muujineysaa in jel goonida dhiiga iyo EDTA-K2 lagu daray tuubada. Kadib daaweynta gaarka ah ee enzyme-ka DNA, enzyme RNA ee muunada ayaa laga saari karaa Qaliinka '60 irbadda' sterraalation 'si loo hubiyo in badeecada ay kujirto tuubada baaritaanka. Sababta oo ah isku darka gogosha kala baxa iyo darbiga tuubada oo leh xiriir wanaagsan, ka dib centrifuge, koolada kala goynta inert waxay si buuxda u kala saari kartaa walxaha dareeraha ah iyo waxyaabaha adag ee dhiiga ku jira waxayna gabi ahaanba isku urursan karaan xannibaadda dhexda tuubada ilaa xasiloonida xasilloonida muunadyada adkaysiga kuleylka iyo xasiloonida.
Darbiga gudaha ee tuubada aruurinta dhiiga waxaa si isku mid ah loogu buufiyaa heparin sodium ama lithium heparin, oo si dhaqso leh wax uga qaban kara saamiyada dhiigga, si loo helo Plasma tayo sare leh oo dhaqso leh. Marka lagu daro astaamaha heparin sodium, lithium heparin sidoo kale faragalin kuma lahan dhammaan ion ay ku jiraan soodooyinka sodium, sidaa daraadeed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ogaanshaha walxaha raad raaca.
Tuubbooyinka Dhiiga Dhiiga micro Micro
Tuubooyinka dhiiga qaada ee micro-ga: waxay ku habboon yihiin ururinta dhiigga ee carruurta dhasha ah, dhallaanka, bukaannada ku dhaca qaybaha daryeelka degdegga ah, iyo bukaannada gubta daran ee aan u habooneyn ururinta dhiigga dhiiga ku jira. Tuubada dhiiga uruurinta ee micro waa tuubada cadaadiska aan-diidmada aheyn, habka loo adeegsadona waa mid la mid ah tuubada aruurinta dhiigga faaruqinta ee isla midab ah.
Tuubada gulukooska ayaa loo isticmaalaa ururinta dhiigga ee loogu talagalay baaritaanka sida sokorta dhiiga, u dulqaadashada sonkorta, erythrocyte electrophoresis, haemoglobin ka hortagga alkalla iyo lactate. Sodium Fluoride ee lagu daray waxay si wax ku ool ah uga hortagtaa dheef-shiid kiimikaadka sonkorta dhiigga iyo Sodium Heparin waxay si guul leh u xallisaa hemolysis. Sidaa daraadeed, heerka asalka ah ee dhiigu wuxuu socon doonaa waqti dheer wuxuuna dammaanad qaadayaa in la helo baaritaanka tijaabada ah ee sonkorta dhiigga 72 saacadood gudahood. Ku darista ikhtiyaariga ah waa Sodium Fluoride + Sodium Heparin, Sodium Fluoride + EDTA.K2, Sodium Fluoride + EDTA.Na2.
Isku-darka xoogga sodium citrate waa 3.8%. Saamiga mugga daawada xinjirowga lidka ku ah dhiiggu waa l: 4. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa tijaabada suuxinta dhiigga. Cabbirka sare ee xinjirowga lulataaye ayaa dhiig ku daadiya markaa sidaa darteed, waxay dardar gelisaa heerka qalliinka dhiigga. Cabbirka yar iyo cadaadiska xun ee tuubada dhexdeeda awgeed awgeed, waxay u baahan tahay waqti xoogaa uruurin ah oo dhiig ah. Si dulqaad leh u sug ilaa dhiiggu ka joojinayo socodka tuubada.
Sodium citrate waxay u shaqeysaa sida anti-coagulant iyadoo loo adeegsado iyadoo la adeegsado kaalshiyamka dhiiga. Isudheellitirka sodium citrate waa 3.2% iyo saamiga mugga ee anti-coagulant iyo dhiiggu waa l: 9. Waxaa badanaa loo isticmaalaa baaritaanka coagulation (prothrombin time, thrombin time, thromboplastin qayb firfircoon, fibrinogen). Isugeynta isku-darka ayaa ah 1 qeyb citrate ilaa 9 qaybood oo dhiig ah.
EDTA waa aminopolycarboxylic acid iyo wakiilka qishka oo si wax ku ool ah u joojinaya kaalshiyamka dhiiga. "Kaalshiyam la taaban karo" ayaa laga saarayaa kaalshiyamka goobta falcelinta oo waxay joojisaa sunta ama isku-darka dhiigga. Marka la barbardhigo coagulants kale, saamaynta ay ku leedahay isku darka unugyada dhiiga iyo cilmiga unugyada dhiiga ayaa aad uga yar. Sidaa darteed, cusbada cusbada (2K, 3K) waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa sidii iskudheellitir la'aan baarista dhiigga ee joogtada ah. Cusbada EDTA looma isticmaalo tijaabooyinka qaarkood sida coagulation dhiig, walxaha raad raaca iyo PCR.
Coagulant waxaa lagu dahaadhay darbiga hoose ee tuubada dhiiga qaada, dardar gelinta isku-darka dhiigga iyo yareynta muddada baaritaanka. Tuubadu waxay ka koobantahay jel gooni ah, oo gabi ahaanba ka soocaya walxaha dareeraha dhiiga (serum) ka kooban maadada adag (unugyada dhiiga) isla markaana isku daraa labada qaybood ee tuubbada dhexdeeda xayir. Badeecada waxaa loo isticmaali karaa tijaabada bayoolajiga dhiiga (shaqada beerka, shaqada kelyaha, shaqada enzyme, myocardial enzyme function, amylase function, iwm), tijaabooyinka unugyada elektrolyte-ga ee loo yaqaan 'serum potassium, sodium, chloride, kalsiyum, fosfooraska, iwm), shaqada tayroodhiska, AIDS, calaamadaha burooyinka , immumology, tijaabada dawooyinka, iwm.
Tuubada coagulation waxaa lagu daraa coagulant, firfircoonida thrombin iyo u badalaya fibrinogen milloobka ah ee polymer fibrin poly-ka, taasoo sii noqonaysa isku-darka fibrin. Tuubada coagulation waxaa loo istcimaalaa falanqaynta bayoolaji dhakhso leh ee xaalada degdega ah. Tuubbada isku-xidhka ayaa sidoo kale ku jira xasilinta gulukoosta dhiigga waxayna beddelaysaa tuubada ka hortagga gulukoosta dhiigga ee caadiga ah. Sidaas darteed, ma jiro wakiil ka hortaga coagulation sida sodium fluoride / potassium oxalate ama sodium fluoride / heparin sodium looma baahna baaritaanada gulukoosta dhiigga iyo u dulqaadashada gulukooska.
Shayga dheecaanka unugyadu wuxuu kala saaraa unugyada caadiga ah ee isku-darka dhiigga iyo shaybaarka ayaa loo sii adeegsan karaa ka dib markii xarun dhexe la soo dejiyo. Tuubbada dhiiga ee loo yaqaan 'serum tube' waxaa badanaa loo isticmaalaa tijaabooyinka serum sida falanqaynta bayoolajiga kiimikada (shaqada beerka, shaqada kelyaha, myocardial enzymes, amylase, iwm.), Falanqaynta elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'potassiumum, soodiyam, chloride, kaalshiyam, fosfooraska, iwm.), Shaqada tayroodh, AIDS, astaamaha burooyinka iyo serology, tijaabada daroogada, iwm.